Nkesa ọgwụgwọ mgbochi ọrịa COVID abụghị maka onye ọ bụla
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Nkesa ọgwụgwọ mgbochi ọrịa COVID abụghị maka onye ọ bụla
Otu otu ụlọ ọrụ na-ere ọgwụ isii taa katọrọ mkpebi nke US Centre for Medicare & Medicaid Services (CMS) na-agba ume naanị mana ha achọghị ịkwụ ụgwọ maka ndị na-ere ọgwụ maka nnwale, nyocha ndị ọrịa, ịtụ / ndenye na inyefe maka mgbochi COVID-19 ọnụ. ọgwụ, nwere ike igbochi ikike nke ndị ọrịa Medicare ịnweta ọgwụ ndị a na-azọpụta ndụ - karịsịa ndị nọ n'ime ime obodo na obodo enweghị nchekwa.
Okwu a na-enwe mmetụta nke ukwuu n'oge, n'ihi na otu kọmitii nke nchịkwa nri na ọgwụ ọjọọ na-ezukọ taa iji chọpụta ma ọ ga-enye ikike iji ihe mberede maka molnupiravir, ọgwụ mgbochi ọnụ nke Merck mepụtara.
Otu ahụ kwuru, "Mgbe ihe karịrị otu afọ nke na-aga n'ihu na-agbasawanye ikike nke ndị ọrịa ịnweta ule COVID-19, ọgwụ mgbochi, na ọgwụgwọ sitere n'aka ndị na-ere ọgwụ na ndị ọrụ ụlọ ahịa ọgwụ ndị ọzọ, ọdịda nke CMS chọrọ ka a kwụọ ndị na-ere ọgwụ ụgwọ maka ule, nyocha nke onye ọrịa. , na inye iwu / inye iwu, na mgbakwunye na ịnye ọgwụ mgbochi ọnụ na-eme ka ọ dị ntakịrị ma guzobe usoro nkesa maka ọdịda.
“CMS kwesịrị ịkọwa nke ọma ụzọ ịkwụ ụgwọ dị mkpa iji kwe ka ndị ọrịa na-ere ọgwụ nweta ọgwụ ndị a na-azọpụta ndụ. Pasent XNUMX nke ndị America bi n'ime kilomita ise nke ụlọ ahịa ọgwụ, na-eme ka ha bụrụ ebe kachasị mma maka ndị ọrịa na-enweta ọgwụ ndị a. Na mgbakwunye, ụlọ ahịa ọgwụ agbataobi dị n'ime ime obodo na obodo enweghị nchekwa nwere ike ịbụ naanị onye na-ahụ maka ahụike maka kilomita.
“Gọọmentị etiti emeela ka o doo anya na anyị chọrọ aka niile iji merie COVID-19 wee kwalite nha anya ahụike site n'inye ndị na-ere ọgwụ na ndị ọrụ ọgwụ ndị ọzọ ka ha nye iwu na inye ọgwụ mgbochi ọnụ. N'egbughị oge, n'oge ọrịa a niile, ndị na-ahụ maka ọgwụ na mba anyị agbagoro iji gboo mkpa ahụike ọha nke ndị ọrịa anyị. "
Ndị otu na-akwado:
Ndị otu American Pharmacists Association
American Society nke Health-System Pharmacists
College of Psychiatric na Neurologic Pharmacists
Ndị otu ndị na-ahụ maka ọgwụ na mba obodo